Boston Terrier vs French Bulldog - Kedu Nkịta Bụ Eze nke Bull Breeds? - Reeddịrị
Boston Terrier vs French Bulldog - Kedu Nkịta Bụ Eze nke Bull Breeds?
Na-achọ anụ ụlọ ezinụlọ ọhụrụ, mana, enweghị ike ikpebi n'etiti Boston Terrier vs French Bulldog?
Agbanyeghi na nkita abuo a yikiri onwe ha, nwekwaa nkita yiri ya, ha di nkita di iche.
Boston Terrier na French Bulldog dị iche iche dịka nkịta na-esote, mana, ha abụọ ga-ahụ ngwa ngwa ụzọ ha bata n'obi gị .
A hụrụ nkịta abụọ ahụ na 1800 mbụ ma bụrụ nkịta ndị ama ama na aka ha. Bouncy Boston Terrier ma ọ bụ fun French Bulldog ọ dị mma maka gị? Gụọ na chọpụta.
Nwere ike ịhụ ọdịiche dị n'etiti Boston Terrier na French Bulldog? A na-ese foto nke Boston Terrier n’elu.
Boston Terrier na French Bulldog Comparison Isiokwu
Boston Terrier vs French Bulldog - Kedu ihe dị iche?
Boston Terrier na French Bulldog nwa nkita
Boston Terrier na French Bulldog Temperament
Nkịta ndị a ọ dị mma na ezinụlọ?
Ndi nwere Boston Terrier ma obu French Bulldog?
Boston Terrier vs French Bulldog Kedu nke choro nri ọzọ?
Boston Terrier vs French Bulldog Kedu nke na-achọ mmega ahụ ọzọ?
Etu ị ga-esi zụọ Bulldogs ndị a
Nsogbu Ahụ Ike na Boston Terrier na French Bulldog
Ọdịdị: Boston Terrier vs French Bulldog
Nchịkọta nke ụdị izu
Nha 11-12 ″ ka nkita kpara nku 15-17 ″ ka nkịta kpọnwụrụ
Ibu ibu Lesmụ nwoke: 17-28lb na ụmụ nwanyị: 16-28lb 10-25lb
Afọ ndụ 10 - 14 afọ 11 - 13 afọ
Adabara Onye ọ bụla (Ezinụlọ, Di na Nwunye Ndị Agadi na Ndị nne na nna na-azụ ụmụ)
Agba dị iche iche Brindle, Fawn, Tan, White, Bulu Ejiri nchikota nke White, Black, Brindle or Seal
Iwe Obi ụtọ, Egwuregwu, Enyi na Enyi Na-eguzosi ike n'ihe, Enyi na Enyi, Isi ike, Na-egwuri egwu
Aha ndị ọzọ Frenchie
A hụrụ Bulldogs French na 1800s, na-egosi n'okporo ámá Paris dị ka obe n'etiti English Bulldog na nkịta Parisian dị na mpaghara.
Ha na nkịta na-alụ ọgụ dị mma n'ihi na ihu ihu ha na-eme ka ha taa nkịta ma gaa n'ihu na-eku ume, ebe ntị ha dị nkọ pụtara na ọ na-esiri nkịta ike ịta ha na mmegwara.
Mgbe oge na-aga, echiche ndị ọzọ banyere egwuregwu ọbara gbanwere iji gosipụta obi ọjọọ ha na French Bulldogs amalitere ịbụ onye a maara dị ka anụmanụ na-esonye.
Ha bụ ndị a ma ama na European Aristocrats, ma site na ịzụlite ozuzu, ha dị obere na ndị enyi ma si otú a bụrụ French Bulldog anyị niile maara na amụrụ amụrụ.
N’ụghị anya, dịka nke 2017, French Bulldogs bụ nkịta nke anọ kachasị ewu ewu na America.
N'iji ya tụnyere, a hụrụ Boston Terrier na 1870, mgbe Robert C. Hooper nke Boston zụrụ nkịta a na-amaghị ama na aha ọdụm wee kpọọ ya Onye ọka ikpe.
A maara onye ikpe ugbu a dị ka nna ochie nke Boston Terriers niile.
A na-eri nri ya na French Bulldogs nke nyere ụdịdị ụdị maka Boston Terrier. Ka ọ na-erule afọ 1889, ụdị a ewu ewu nke ukwuu ma bụrụ otu n'ime nkịta ole na ole sitere na America .
A nabatara ụdị ahụ na American Kennel Club (AKC) na 1893, afọ isii tupu French Bulldog na 1898.
French Bulldog puppy na-efu ihe dị ka $ 1,500 na $ 3,000 USD, na nkịta nkịta na-eme ka ị laghachi $ 2,200.
Nwa nkịta Boston Terrier dị ọcha na-erekarị na mpaghara $ 600 na $ 1,500 USD, mana, maka ụmụ nkịta ahụ nwere ike ịchọta agbụrụ ha n'aka Onye ọka ikpe, ha nwere ike ree ihe ruru $ 4,500 USD.
Mgbe ị na-atụle Boston Terrier na French Bulldog ọnụahịa, Frenchies bụ okpukpu abụọ ọnụahịa nke bouncy Boston.
N'ihi ọnụahịa ha ka ukwuu , ma ụdị nkịta abụọ a a ọkacha mmasị nke puppy ọrụ ugbo .
Mgbe ị na-achọ ịzụta nwa nkita, gbalịa na-achọ na ndepụta AKC nke ndị na-edebanye aha ndị edebanyere aha, ma ọ bụ jiri ebe nrụọrụ weebụ a na-ahụ maka ịchọta French Bulldog ma ọ bụ Boston Terrier puppy nwere ụkpụrụ ọdịmma dị mma bụ ndị ejiri mmekọrịta ziri ezi.
Ma Boston Terrier na French Bulldog bụ ndị amaara n'ihi na ha buru ibu karịa ndụ mmadụ na ịnụ ọkụ n'obi maka ndụ.
A maara nkịta ndị a n'ihi obiọma na ikike iji anụ ụlọ ndị ọzọ - French Bulldogs karịsịa.
Ihe ọzọ nkịta ndị a nwekọrọ ọnụ bụ na ha na-atụ ụja! N'ihi ihu ha dị mbadamba , a maara nkịta ndị a ama n'ihi snoring ha na mkpọtụ ndị ọzọ dị ka iku ume. Mgbe ị na-atụnyere Boston Terrier na French Bulldog, ikekwe ị ga-ahụ French Bulldogs gị karịa Boston Terrier, mana, onye ọ bụla nwere ike ịnwe nkịta ndị a kwesịrị ịkwadebe maka nwa nkịta na-eme mkpọtụ.
A maara Boston Terriers maka ha ịhụnanya nke ịhụnanya na ịhụnanya ; N'otu aka ahụ French Bulldogs kwa.
Onye Boston Terrier anaghị adịkarị ike, agbanyeghị, ha ga-ata nri ha n'ụzọ ọ bụla iji bịakwute gị. N'ihi ya, ha ata ahụhụ n'ihi nkewa nchegbu ma enwere ike mara na ọ bụ ihe na-emebi emebi: ịta ụta, ịta ụfụ na ịkọ ọkọ.
French Bulldogs dị n'otu ama nke ọma na ụmụaka na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ, na-ahụghị ihe ọ bụla karịa egwuregwu bọl n'ime ogige ahụ.
Boston Terrier dote na ezinụlọ ha. Ha hụrụ mmadụ niile n'anya, ha ga-akpọrọ ụmụaka ngwa ngwa. Obere obere ha bụ ihe aghụghọ, ha ga-enwe mmasị igwu egwu na ụmụaka gị ma na-agba ọsọ mgbe niile n'ogige ahụ.
Mgbe na-egosipụta ma ndị a nkịta na-elekọta kwesịrị iwere na ha adịghị ekpo oke ọkụ dị ka ha abụọ nwere ike ịrịa ọrịa brachycephalic obstructive airway syndrome ... ọzọ na nke a mgbe e mesịrị na ngalaba nyocha ahụike.
Dịka Terrier niile, Boston Terrier na-amasị ịgbọ ụja, ọ nwere ike ịme ma ọ bụrụ na ike agwụ ha. Buso nke a site n'inye ha mkpali nke anụ ahụ na nke uche. Egwuregwu kwesịrị ịdị mgbe niile ka nkịta gị gwuo. Boston Terriers nwere ọgụgụ isi ya mere gbalịa ihe dịka bọọlụ mgbaghoju anya ma ọ bụ zoo ma chọọ.
N’akụkụ tụgharịa nke a, French Bulldogs adịkarịghị eti mkpu ma ọ bụrụ na ị na-achọ nkịta dị jụụ, nke a nwere ike ịbụ nhọrọ dị mma maka gị.
French Bulldogs maara na ya na ụmụaka na-eme nke ọma ma nwee obi iru ala.
O nwere ike iju gị anya ịnụ mgbe ị na-atụle Boston Terrier na French Bulldog site na nri, French Bulldog ga-eri ntakịrị.
French Bulldogs bụ amaara ha maka afọ na-adighi ha mma , Ya mere, ị kwesịrị izere inye nri nri eserese na ọtụtụ mgbakwunye - ọ bụrụ na ịchọrọ ịmịkọrọ akọrọ, zụọ nri dị elu, ọka nkịta na-enweghị nri.
A naghị atụ aro nri mmiri maka nkịta brachycephalic n'ihi na ha enweghị ezé n'ihi ọdịdị ihu ha arụpụta na nkịta eze nro .
Ma Boston Terriers na French Bulldogs nwere ike ime nke ọma na raw nri.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịzụ nkịta gị nri nrị, ị kwesịrị ị na-eri ihe dịka anụ 75%, ọkpụkpụ 15% na akụkụ 10%. Akwukwo nri siri ike igwu nke mere na ha achoghi otutu ha, ma kwesiri inye ha obere.
Ezigbo Nri Nri
Nri ndi n’eri nri gha aru aru dika nkita nkucha nke nkita gi.
Agbanyeghị na nkịta ndị a nwere ike iyi ihe yitụrụ, ha nwere usoro mmega ahụ dị iche.
Ọ bụ ezie na French Bulldogs nwere obi ụtọ karịa ịnọrọ ọdụ n'ihe ndina ya ụbọchị niile, Boston Terriers bụ n'ụzọ aghụghọ. Nwere ike iwepụtakwu oge oge iji kpalie Frenchie gị ka ị gaa “Walkies” karịa ịga ije n’ezie.
Ozugbo arụ ọrụ, nkịta ndị a nwere obi ụtọ karịa ịga maka ọkpụite, izute ndị mmadụ ọhụrụ na nkịta bụ isi iyi nke ọ joyụ maka French Bulldogs. Agbanyeghị, ọtụtụ ụbọchị, ha ga-enwe afọ ojuju maka ite ite nkịta nọ n'akụkụ gị.
N'aka nke ọzọ, Boston Terriers hụrụ n'anya ịgba ọsọ, ha nwere ike ịkwa ụja na nkịta ndị dị obere karịa ha, mana, n'eziokwu na nkịta a niile na-ata ụta na enweghị ọnya.
Ihe mmasi abuo kacha amasị ha n’uwa n’uwa bu mmadu ha na achu a ball, ije ije na-enye ha ohere ime ha abuo. Were ha ebe dị ka ogige nkịta ma ọ bụ ubi ma tụpụrụ ha bọl ha. Agbanyeghị, were aka mee nke a, ma gbaa mbọ hụ na mmiri dị n’aka dị ka nkịta ndị a nwere ike ikpo oke ọkụ.
Ije ije naanị agaghị enwe mmega ahụ maka Boston Terrier nwere ọgụgụ isi mgbe niile.
Nkịta ndị a chọrọ mkpali nke uche nakwa mmega ahụ. Gbalịa ịhapụ egwuregwu maka nkịta gị ka ọ kpọọ, dịka bọọlụ mgbaghoju anya, ma ọ bụ ọzụzụ aghụghọ n'ehihie iji mee ka nkịta gị nwee ike zuru oke.
Mgbe ị na-azụ Boston Terrier, dị njikere ibuso ọgụ. A maara Boston Terrier maka ọdịdị isi ike na mkpebi siri ike ya, na ama ama na anaghị eme ihe ọ bụla ha achọghị ime.
N'aka nke ọzọ, French Bulldogs mara na ha na-adịkarị nwayọọ, nke pụtara na ha ga-eme ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ị jụọ ha nke ọma.
Mgbe ị na-enyocha Boston Terrier vs French Bulldog site na ọzụzụ, ha abụọ zaghachi nke oma na ihe omuma n'ihi ọdịdị egwuregwu ha. Ọzụzụ Clicker tụgharịrị ọzụzụ ka ọ bụrụ egwuregwu, dịkwa ka anyị kwurula na mbụ, nkịta ndị a nwere mmasị igwu egwu.
Ma Boston Terrier na French Bulldog bụ Brachycephalic nkịta , nke pụtara na ha nwere ihu ọma.
Nke a na - ebute ọtụtụ ọnọdụ ahụike gụnyere nsogbu iku ume yana enweghị ike ịchịkwa ọnọdụ okpomọkụ, nke a maara nke ọma dịka Brachycephalic Airway Obstruction Syndrome.
Dịka e kwuru na mbụ, ekwesighi ikwe ka nkịta ndị a gwuo egwu nke ukwuu, ma ọ bụ mee ha ogologo oge, n'ihi enweghị ike ịjụ oyi. Ihu ihu ha na-eme ka o siere ha ike ịsụ ude nke ọma iji mee ka ọnọdụ okpomọkụ ha dị ala .
Ekwesịrị ịgagharị ije n'ụtụtụ na mgbede n'oge ọkọchị iji gbochie anwụ na-acha anwụ anwụ n'oge anwụ, ma egwuregwu ga-adị mkpụmkpụ - enwere ike ịnweta ndò mgbe niile na mmiri.
N'akụkụ nke dị n'akụkụ nke a, French Bulldogs nwere ajị anụ dị mkpụmkpụ ka ha wee nwee ike ịchọ kootu n'oge njem oyi.
Ihu ihu ha Brachycephalic pụtakwara na ha nwere anya buru ibu, na-ekpughere anya ma ya mere, mgbe ha na-atụle ahụike nke Boston Terrier na French Bulldog ma nkịta na-enwe ike ịmalite nsogbu anya na mpaghara a.
Ndi Boston nwere nsogbu nke ndi umuaka ndi ozo, ma, ndi ozo di nma kwesiri inwe ike nwalee nwa nkita gi. Enwekwara ụfọdụ ihe akaebe nke Corneal ọnya n'ime ụdị ahụ.
E kwesiri ilebara nkịta gị anya nke ọma, a ga-eme ihe ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ma ọ bụrụ na ị chọpụta nsogbu na ọhụụ nkịta gị.
N'ihi ebughibu French Bulldog, nkịta ndị a enweghị ike ịtụrụ ime n'ụzọ nkịtị, n'ọtụtụ ọnọdụ, enweghị ike ịmụ nwa. N'ezie, 80% nke bulldogs French mụọ nwa site na caesarean ngalaba .
Boston Terrier vs French Bulldog - ị nwere ike ịhụ ọdịiche ahụ?
A maara Boston Terriers bụ maka aji ya dị nro, nke a na-ejikarị oji na ọcha. Ha nwere isi buru ibu, ntị dị nkọ na ọdụ dị mkpụmkpụ. Ahụ ha siri ike ma dịkwa mkpụmkpụ . A maara ha ka ha na-eburu onwe ha amara.
E jiri ya tụnyere French Bulldog, a maara ha maka ihe ọ bụla ma amara. Kwụ ha dị mkpụmkpụ ma dịkwa afụkọ, ahụ ha bụkwa akụkụ atọ ka ọ dabakọ. Ha onwe ha nwere ntị nwere ihu na ihu dị mbadamba ma ha dị arọ karịa Boston Terriers.
French Bulldogs nwere agba dị iche iche dịka fawn, brindle, tan, black, white or blue. Nke a nwere ike ịbụ agba siri ike ma ọ bụ nkedo.
Ọdịdị dị iche n'etiti Boston Terrier na French Bulldog
Nha 11-12 ″ 15 ″
Ibu ibu 16-28lb 10-25lb
Agba dị iche iche Brindle, Fawn, Tan, White, Bulu Njikọ nke White, Black, Brindle ma ọ bụ Akara
N'ihe banyere otu edozi chọrọ, n'adịghị ka nkịta ndị yiri ya , nkịta ndị a adịghị mkpa ọtụtụ edozi.
Ma French Bulldogs ma ọ bụ Boston Terriers chọrọ mkpachapụ. Ha chọrọ nchapu ọ bụ ezie na Boston Terrier na French Bulldog na-awụpụ oge niile, yabụ na-ekwesịghị ekwesị maka ndị na-arịa ọrịa nfụkasị.
N'ihi isi ha brachycephalic, nkịta ndị a chọrọ ọtụtụ ọrụ eze. A ghaghị ime nchacha ezé mgbe niile, ọ dịkarịa ala otu ugboro n'ọnwa ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, a na-atụ aro ileta ndị nleta na mgbe niile.
Kwesịrị ịmechi ntu ntu site n'aka onye ọkachamara, dịka onye na-edozi ma ọ bụ ọkachamara anụmanụ.
Nkịta abụọ a bụ ezigbo anụ ụlọ!
The fabulous French Bulldog ga-abụ okpueze dị ebube nke ezinụlọ gị. Ọ bụrụ n'ịga maka Bulldog nke French, gbaa mbọ hụ ị gụọ aha French Dog anyị zuru oke .
N'aka nke ọzọ, Boston Terrier na-enwu gbaa na ọgụgụ isi ya na ngwa ngwa ga-abụ ajọ njọ mgbakwunye ezinụlọ ọ bụla.
Nkịta abụọ a nwere mmetụta miri emi, yabụ ha anaghị eme nke ọma ịhapụ naanị ha, ọkachasị Boston Terrier. Nke a nwere ike ịbụ ihe ị ga-atụle mgbe ị na-achọ ịzụta otu n'ime nkịta ndị a.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịnweghị ike ikpebi n'etiti Boston Terrier na French Bulldog, ma eleghị anya tụlee a ụdị obe dị ka Frenchton : 75% French bulldog na 25% Boston Terrier, nkịta a bụ a zuru okè Nchikota abụọ.
You nwere echiche nke ọ bụla n'ime obere nkịta ndị a dị egwu? Enwere ike ịhapụ anyị ịhapụ anyị ikwu na ngalaba nkọwa dị n'okpuru.
Ndi Golden Retriever Chow mix nkịta na-eme ihe ike?
Black Pomeranian: A Guide to Complete Iji The Jet Black Pom
kedu ka nwa nkita gị ga -esi buru ibu
ọlaedo retriever na spaniel mix
ezigbo aha maka anụ ọhịa wolf
painiapulu dịkwa mma maka nkịta